La socodsiin qorshaha 2021-22 ee dib ugu noqoshada dugsiga | Updates
La socodsiin qorshaha 2021-22 ee dib ugu noqoshada dugsiga
Qoysaska Iskuulada Nawaaxiga Osseo,
Badhtamihii July, iskuulada Nawaaxiga Osseo waxay idinla wadaageen orshaha dib ugu laabashada iskuulada oo sal looga dhigay sanad-dugsiyeed caadi ah. Intaa kadib warbiximihii u dambeeyey ee xanuunka COVID-19 Variant, Delta, ayaa aad u kordhay dadka laga elay Minnesota, degmada Hennepin, iyo magaalooyinka degmmadeenu u shaqayso. Gaar ahaan, kiisaska laga helay caruurta da’da iskuulka ee degmada Hennepin, ayaa xoog kor ugu kacay. Hawl-wadeenada caafimaadka hay’adda caafimaadka Maraykanka CDC iyo waaxda caafimaadka Minnesota (MDH) ayaa isku raacay in xanuunka delta Variant uu yahay mid aad u fidaya, oo sababaya kororka kiisaska dadka laga helay
Xaaladan kordhaysa ayaa sababtay in dib loo eego qorshihii degmada ee dib-ugu-laabashada iskuulada 2021-2022 oo nagu hogaamisay in wax laga bedelo usbuucan. Inta badan qorshaha hadda waa sidiisii marka laga reebo hal wax: Ardayda ku jira fasalada xanaanada ilaa fasalka 12aad, shaqaalaha iyo dadka booqanaya iskuulada waxaa looga baahnaan doonaa inay xirtaan weji dabool (face covering/mask) dhismayaasha dhexdooda inta lagu jiro afarta billood ee hore (Sept. 8 - Dec. 6). Gudiga Waxbarashada ayaa u codeeyey oo ansixiyey shuruudan kulan gaara oo la qabtay Aug. 20.
Dhawrkii bilood ee la soo dhaafay waxay muujiyeen in yaraynta gudbinta Covid-19 ee dugsiyadeena iyo bulshadeena dhexdooda ay ahayd mid u baahan talaabooyin badan. Isticmaalka weji daboolka waa mid ka mid ah habab badan oo iskuulada Nawaaxiga Osseo rajeynayaan si ay u hubiyaan in ardayda iyo shaqaaluhuba u tagaan iskuulka shan maalmood usbuuciiba sida la qorsheeyey.
Wax ka bedelka qorshaha dib-ugu-laabashada iskuulka waxaa sameeyey gudiga waxbarashada kadib markay dib u eegeen macluumaadka COVID-19 ee degmada, countiga, gobolka iyo dowlada guud, qorshaha diyaargarawga COVID-19 ee iskuuladeena iyo qaab-dhismeedka go’aan gaarista. Balan qaadka iskuulada ee ah in la siiyo dhamaan ardayda, shaqaalaha, iyo bulshadaba jawi waxbarasho amaan iyo caafimaad leh ayaa xooga la saaray.
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah tilmaamaha qorshaha diyaargarawga degmada ee COVID-19ka; Qorshaha buuxa ee degmada waxaa laga daalacan karaa online ka COVID-19 ka.
Waxbarashada iyo diiwaangelinta iskuulka
Ardaydu waxay dhiganayaan iskuulka shan maalmood usbuucii,iyagoo tegaya. Haddii aad doorbidid waxbarashada online ah, waalidiinta/daryeelayaashu waa inay qoraan ardaydooda 279Online, oo ah iskuul online ah oo dhamaystiran ardayda xanaanada ilaa fasalka 12aad. Hadda waxaa ka banaan boosas dhamaan fasalada ardayda raba inay is qoraan.
Ardaydu waa inay raacaan hab la mida marka degmada dhexdeeda u kala bedelanayaan marka ay u kala wareegayaan waxbarashada iskuulka la tegayo iyo mida 279Online ka oo la mida marka ay u kala wareegayaan iskuulada degmooyinka kale. Waa suurtogal in bedelashada la sameeyo Trimester kasta (4tii biloodba mar).
Sanadkan waxaa cusub: Hubi inaad ka buuxiso foomamka dib-ugu-laabashada iskuulada online. Gal district279.org/forms wixii macluumaad dheeri ah.
Talaalka COVID-19 waa loo heli karaa ardayda jira 12 iyo wixii ka weyn. Cadayn talaal lagama rabo ardayda iyo shaqaalaha si ay iskuulka u yimaadaan.
Ardayda iyo shaqaalaha leh kiisas la xaqiijiyey oo COVID-19 ah waxaa la weydiisan doonaa inay isku-karantiilaan guriga. Ardayda iyo shaqaalaha waxaa kaloo la weydiisan doonaa inay guriga isku karantiilaan hadii qof guriga ka mid ah laga heloCOVID-19. Ka ag dhowaanshaha qof laga helay iskuulka waa laguu sheegayaa laakiin waxaa lagu oranayaa guriga iska joog keliya haddii aad calaamado leedahay.
Habraacyada badbaadada iyo caafimaadka
Ardayda, shaqaalaha, iyo dadka booqashada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku dhaqmaan nadaafada caafimaadka qofeed, oo ay ku jiraan inay guriga joogaan markay jiran yihiin, daboolida afka ee qufaca, iyo dhiqista gacmaha.
Ardayda, shaqaalaha, iyo dadka booqashada waxaa looga baahan doonaa inay xirtaan af-dabool markay joogaan dhamaan dhismayaasha iskuulada inta lagu jiro trimesterka koowaad. Ka dhaafitaanada waa la aqbali doonaaiyadoo la raacayo Go’aamada ay ansixiyeen gudiga waxbarashada.
Jeermis dilista iyo nadiifintu way sii socon doonaan. Jeermisdille heerka cusbitaalada ah ayaa loo isticmaali doonaa dhamaan dhismaha iskuulka.
Daaqadaha iyo albaabada waxaa loo furi doonaa jadwal isbedelaya si hawo nadiif ah u soo gasho una wareegto sida ugu suurtogalsan.
Iskuuladu waxay joogtayn doonaan inay isu jiraan ardayda, shaqaalaha iyo booqashayaashu ugu yaraan saddex fiit markii iyo meeshii ay suurtogal tahay.
Ardayda, shaqaalaha iyo waalidiinta/daryeeleyaasha, debecsanaantiina iyo fahamkiina aad baa loo qaderinayaa. Waad ku mahadsan tihiin wada shaqayntiina iskuuladeena si aan u abuuro jawi amaan iyo caafimaad leh intii lagu jiray xanuunka caabuqa.
Macluumaad dheeri ah, oo ay ku jiraan qorshaha diyaargarawga COVID-19 ee degmada iyo su’aalaha soo noqnoqda, waxaa laga heli karaa restart.district279.org.